Food & Restaurant – Myanmar Info Hub
Home Lifestyle Food & Restaurant
မိုးလင်းပိုင်းပဲစားစား မိုးချုပ်မှပဲစားစား ၂၄ နာရီဖွင့်တဲ့ ဆိုင်သစ်လေးတစ်ဆိုင်
in : Food & Restaurant, Lifestyle
အခုမိတ်ဆက်ပေးမှာကတော့ Asian ရော European အစားအစာတွေပါ ၂၄ နာရီလုံးရောင်းပေးနေတဲ့ မိုးလင်းမိုးချုပ်ဆိုတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ ညပိုင်း အပြင်ထွက်တဲ့သူတွေ၊ အစားအသောက်ကောင်းကောင်း စားချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေပါတယ်. ဆိုင်အပြင်အဆင် ကလည်း ခမ်းခမ်းနားနား။ ဓာတ်ပုံဝါသနာအိုးတွေကို လုံးဝစွဲဆောင်မယ့် အပြင်အဆင်ပါ။ အစားအစာတွေက မုန့်ဟင်းခါး၊ နို့ခေါက်ဆွဲ၊ ကြေးအိုး၊ ရှောက်သီးသုပ်၊ တုတ်ထိုး၊ ထမင်းကြော်၊ ကြက်သားသုပ်၊ ငါးသံပရာပေါင်း၊ ငါးကင်၊ ပဲပြုတ်ထမင်းကြော်၊ မြန်မာထမင်းဟင်း၊ တရုတ် မလေး ထိုင်း အစားအစာ စတာတွေရပါတယ်။ ကော်ဖီနဲ့ အအေးမျိုးစုံလည်းရပါတယ်.. ကော်ဖီခွက်လေးထဲ မှာ မိမိ စိတ်ကြိုက် ဓာတ်ပုံလေးတွေ နဲ့ ကော်ဖီလေးသောက်အုံးမလား အဲဒါလည်းရသေးတယ်။ မိုးလင်းမိုးချုပ် ရဲ့ နံမည်ကြီး နို့ မလိုင်လက်ဖက်ရည်လေးရောရပါတယ်။ ကဲဒါဆိုရင်တော့ မနက်ပဲစားစား၊ ညပဲစားစား၊ ၂၄ နာရီလုံးပဲစားစား စိတ်ကြိုက်လေးတွေဆွဲခြင်ရင်တော့ No-31(A), ကန်ရိပ်သာလမ်း, …
Food2U အိမ်အရောက် အစားအသောက်ပို့ဆောင်ရေး ၀န်ဆောင်မှု
မြန်မာပြည်၏ စီးပွားရေးမြို့တော် ရန်ကုန်မြို့တွင် ခေတ်မီစွာ တည်ဆောက်လာသော ကုန်တိုက်ကြီးများက မြို့နေလူအများ လိုချင်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို တစ်နေရာတည်း တွင် အချိန်တိုအတွင်း ရရှိစေနိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ထက် ဆယ်စုနှစ်တစ်စုအတွင်း အလွန်လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲတိုးလက်လာသော ဆက်သွယ်ရေးစနစ်မှ မိုဘိုင်းဖုန်း များနှင့် အွန်လိုင်းစနစ်ချိတ်ဆက်မှုများ ပိုမိုကောင်းမွန် လာခြင်းက မြို့ရန်ကုန်၏ စီးပွားရေးစနစ်ကို Door to Door ဆီသို့ အဟုန်မြှင့် ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ထပ်ဆင့်၍ဆိုရသော် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ပိုမိုပွင့်လန်းစေခဲ့သည်။ မိမိလိုချင်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ဖေ့ဘုတ်မှသော်လည်းကောင်း၊ ဝက်ဆိုဒ်မှသော်လည်းကောင်း အလွယ်တကူရှာဖွေလာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ရာ ကြိုက်နှစ်သက်ပါက ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်စကားပြော၍သော်လည်းကောင်း၊Message မှသော်လည်းကောင်း မှာယူနိုင်ကြပြီဖြစ်သည်။ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်တစ်ဆွဲဖြင့် မှာယူသူ၏အိမ်အရောက် ပို့ဆောင် ပေးနေကြသည်။ ကြိုတင်သိရှိပြီးသော ပစ္စည်းတန်ဖိုးနှင့် ပို့်ဆောင်ခကို လက်ဝယ်ပစ္စည်းရောက်မှ ပေးချေရခြင်းဖြစ်သည်။ လူငယ်အတော်များများ ထိုစီးပွားရေးကို စိတ်ဝင်တစားရှိကြပြီး ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကို လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ ပို့ဆောင်ခ မှာလည်း …
လေညင်းခံရင်း BBQ Buffet စားကြမယ် …
စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ဖွင့်လှစ်မဲ့ LOTTE Hotels & Resorts Yangon ရဲ့ Poolside BBQ Restaurant မှာ အကင်လေးစားရင်း လေညင်းလေးခံရင်းနဲ့ ချစ်ရတဲ့သူကို ရိုမန်တစ်ဆန်ဆန် ချစ်ရေးဆိုမလား? Bff တွေနဲ့ Night out လုပ်မလား? မိသားစုအတွက် ပျော်ရွှင်စရာ Dinner လးဖန်တီးပေးမလား?? တစ်ဦးကို USD 29++ ဆိုတော့ အရမ်းတန်သွားပီလေ… BBQ Restaurant မှာ အသားမျိုးစုံ၊ ပင်လယ်စာ အမျိုးပေါင်းများစွာနဲ့ အချိုရည်များကို အေးအေးဆေးဆေး စိတ်ကြိုက်သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သြော် … ဒါနဲ့ 30% Discount ရှိတယ်ဆိုတာရော သိကြလား? လိုတေးလ် ဟိုတယ်ရဲ့ Restaurants ကြော်ငြာတွေကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်လားပြီးပြရုံနဲ့ 30% သက်သာမှာနော် … Reserve လုပ်ချင်တော့ …
The Manhattan FISH MARKET ကအသစ်ဖန်တီးတင်ဆက်လိုက်တဲ့ Seafood Bomb
ဗုံးတွေထဲမှာကောင်းတဲ့ဗုံးဆိုလို့ The Manhattan FISH MARKET ကအသစ်ဖန်တီးတင်ဆက်လိုက်တဲ့ Seafood Bomb ပဲရှိပါတယ် အကြာကြီးမှအကြာကြီးစောင့်လိုက်ရတဲ့ The Manhattan FISH MARKET ကဂဏန်းဟင်းလျာတစ်မျိုးကတော့အခုအခါမှာသူငယ်ချင်းတို့ရှေ့မှောက်သို့ မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ။ အရသာရှိတဲ့ပင်လယ်စာဟင်းလျာသစ်တွေကိုသူငယ်ချင်းတို့အတွက်ပြင်ဆင်ဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုတော့သူငယ်ချင်းတို့ဘာလုပ်မှာလဲပြော။ မနှောင့်နှေးပါနဲ့တော့။ ဒီ Seafood ဟင်းလျာတွေရဲ့ အရသာကိုအမြည်းအနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့စုံလင်လှတယ့်ပင်လယ်စာအမယ်မျိုးစုံဖြစ်တဲ့ Mussel ၊ Scallop ၊ Calamari နှင့် Fish တို့ကိုဟင်းပွဲတစ်ပွဲထဲမှာခံစားရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပူပူစပ်စပ်အရသာအခြေခံထားတာမို့ သူငယ်ချင်းတို့တွေသဘောခွေ့မနောတွေ့မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။ အစားအသောက်တစ်ခုစားပြီဆိုကိုယ်စားတဲ့ဟင်းလျာတွေမှအနှစ်လေးတွေနဲ့ စိုစိုပြေပြေဖြစ်နေမှသဘောကျပြီးမြိန်ရေလျက်ရေရှိတာဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်လည်းဒီဟင်းလျာလေးကကွက်တိပေါ့ ။ အသေးစိတ်ကိုတော့သူငယ်ချင်းတို့ကုိုယ်တိုင်မြည့်းပြီးတော့သာအကဲခတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ Mud Crab ၊ Salmon နှင့် Tiger Prawn ဆိုပြီး Seafood Bomb ဟင်းလ …
CB Bank Card ရှိရုံနဲ့ Cho Japanese Dining & Bar ဆိုင်ခွဲမှာ အရသာရှိရှိ သုံးဆောင်လို့ရသွားပြီ
နှစ်သက်ရာ CB Bank Card များဖြင့် ငွေပေးချေပြီး Cho Japanese Dining & Bar ဆိုင်ခွဲတိုင်းတွင် Total Food Bill ( Discount ပေးပြီးသား Item များနှင့် Drinks များမပါ) များပေါ်၌ 10% Discount ရယူလိုက်ပါ။ ATM စက်ကနေ တကူးတက ပိုက်ဆံသွားထုတ်စရာ မလိုတော့ဘဲ CB Bank Card ရှိရုံနဲ့ Cho Japanese Dining & Bar ဆိုင်ခွဲမှာ အရသာရှိရှိ သုံးဆောင်လို့ရသွားပြီဆိုတော့ အထူးအခွင့်အရေးဆိုလဲ မမှားဘူးနော်။ Cho Japanese Dining & Bar ရဲ့လိပ်စာတွေကတော့…. Branch (1) – 91M, Than Lwin Road, Bahan Township …
The Manhattan FISH MARKET ရဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ Fried Giant
တစ်ကြွပ်ကြွပ်နဲ့အရသာရှိတဲ့ပင်လယ်စာတွေကို အမုန်းဆွဲချင်နေတဲ့သူတွေအတွက် The Manhattan FISH MARKET ရဲ့ လူကြိုက်များတဲ့ Fried Giant နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သိပ်အရသာရှိတဲ့ Tiger Prawn ကြွပ်ကြွပ်ကြီးတွေရယ်၊ ငါးသားချောင်းကြော်တွေရယ်၊ Cherry Snapper ငါသားလွှာကြော်တွေရယ် ၊ပြီးတော့အခြားစားကောင်းတဲ့အမယ်တွေလည်းပါသေးတယ်။ ဘာမျိုးလည်းဆိုတော့ကြိတ်ထားတဲ့မြေပဲတွေကိုကပ်ပြီးကြော်ထားတဲ့ Calamari နဲ့ ကြက်သွန်ချောင်းကြော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဖွယ်ဖွယ်ရာရာစုံစုံလင်လင်အကြော်မျိုးစုံနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ Fried Giant ကိုလူကြီးမင်းတို့အကြိုက်တွေ့ ကြမယ်ထင်လို့ အားလပ်ရပ်မှာ မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ သွားရောက်စားသုံးနိုင်ရန်လမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆိုင်လိပ်စာတွေကတော့ Myanmar Plaza, Unit 311 Yangon, Yankin +95 (9) 777-14-15-16 44/56 Kannar Street, Corner of 41st Street, M.M.G Tower Yangon, Botataung +95 (9) 777-11-12-13